Wararka - Baaldiyeyaasheena qodda-Dammaanadda tayada iyo cimri dhererka
Baaldiyeyaasheenna qod-jeexjeexa-Dammaanadda tayada iyo cimri dhererkooda
XUZHOU MINYAN IMPORT & EXPORT CO., LTD. oo ku yaal magaalada ugu caansan mashiinnada dhismaha ee Xuzhou, Shiinaha. Maadaama aan nahay mashiin dhisme xirfadle ah iyo qeybaha dayactirka, Minyan waxay leedahay khibrad suuq geyn sanado badan mashiinada dhismaha ee Shiinaha, waxaan leenahay khibrad iyo ilo badan oo ku saabsan iibka ka hor, iibka iyo kadib iibka, waxaana naloo ogolaaday dhoofinta xuquuqda dowlada Shiinaha, falsafadeena ganacsi waa "Kalsoonida, Hufnaanta, Kaamilnimada" - ereyga CIP.
Baaxadda Ganacsiga: Waxsoosaarkeenna waxaa loo dhoofiyay 80 dal oo kala duwan; oo ay ka mid yihiin Australia, American, England, Poland, Russia, India, Wadammada ugu waaweyn ee Afrika, Mid-Aasiya, Koonfur-bari Aasiya iwm.
1. Warshaddeena inta badan waxay soo saartaa EXCAVATOR ROCK BUCKET, EXCAVATOR EARTHMOVING BUKKET, EXCAVATOR SIEVE BUCKET, BULKET IEETH, EXCAVATOR RIPPER, EXCAVATOR QUICK COUPLER, alaabteenu waxay ku habboon yihiin dhammaan noocyada moodeelka. Sida CAT, XCMG, KOMATSU, BOBCAT, SHANTUI, HYUNDAI…
2. Shirkadeenu waxay kaloo dhoofisaa mishiinnada hoos u dhaca
(1) Wiish otomaatiga si buuxda u shaqeeya, miisaanka qaadista ugu badan ee laga bilaabo 8 tan ilaa 160 tan.
(2) Haydarooliga si buuxda u shaqeeya wiishka gawaarida dhulka oo dhan, culeyska qaadista ugu badan laga bilaabo 25 tan ilaa 1200 tan.
(3) wiishka wiishka, culayska ugu badan ee laga qaado 35-tan 2000 tan
(4) Wiishka munaaradda (jiib jiif ah, jiib la dhaqaajin karo), ugu badnaan qaadista laga bilaabo 4 ilaa 50ton. Noocyada oo dhami waxay xaqiijin karaan joogitaanka, gawaarida hoose, safarka iyo ku xirnaanta baahidaada dhismaha.
3. Wadada gawaarida, miisaanka laga bilaabo 0.8 tan ilaa 30ton. Oo ay ku jiraan labada durbaan, rullaluistemadka wadada birqaya, hal durbaan iyo rullaluistemadka wadada birqaya, duubista wadada pneumatic.
4. Asphalt & paver la taaban karo, balaca shaqada ee u dhexeeya 2.0m ilaa 14m.
5. Gawaarida gawaarida, awoodda baaldi ee 1 tan ilaa 12 tan. Mugga baaldi ka 0.5 cbm ilaa 6.5cbm
6. Bulldozer laga bilaabo 80hp ilaa 520hp
7. Miisaanka Crawler Excavator iyo mugga baaldi godka godka laga bilaabo 0.044cbm ilaa 6cbm. Miisaanka hawlgalka ee ka socda 1.64t ilaa 90t
8. Gawaarida Gawaarida laga bilaabo 102hp ilaa 535 hp.
9. Qalabka la taaban karo sida makiinada wax lagu qaso oo ka bilaabata 6cbm ilaa 14cbm, bamka shubka laga bilaabo 37m boom ilaa 56